According | Pyithu Hluttaw
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း(၂) ပုဒ်မ (၃) အရ	ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို	လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေအများဆုံး ၄၄၀ ဦးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း	ဖွဲ့စည်းရမည်-
(က)	ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအရရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် ၃၃၀ ဦးထက်မပိုသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊
(ခ)	တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကဥပဒေနှင့်အညီအမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် ၁၁၀ ဦးထက်မပိုသောတပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း(၉) ပုဒ်မ (၃၄) အရ	လွှတ်တော်သက်တမ်းတစ်ရပ်၏ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲစတင်ကျင်းပသည့်ရက်မှရက်ပေါင်း၉၀အတွင်းကျင်းပရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း(၄) ပုဒ်မ (၉) အရလွှတ်တော်	ကိုယ်စားလှယ်များ၏တာဝန်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(ဂ) လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသောဥပဒေကြမ်းများ၊အဆိုများနှင့်စပ်လျဉ်းဆွေးနွေးရာတွင်နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးပွားကိုသာအဓိက ထားခြင်း၊
(င) မဲဆန္ဒမြေနှင့်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်မဆန့်ကျင်စေဘဲသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဖြစ်စေ၊အာဏာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဖြစ်စေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(စ)	မဲဆန္ဒရှင်များအားလွှတ်တော်အတွေ့အကြုံ ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း(၉) ပုဒ်မ(၄၃) အရ	ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းဝေးများ၌အောက်ပါကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်သည် -
(ဃ)	ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရလွှတ်တော်ကဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်း
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေအခန်း (၁၇) ပုဒ်မ၁၅၅ အရ	ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းက ဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ	အောက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ကိုရယူလိုလျှင် လွှတ်တော်သို့ အဆိုအဖြစ်တင်သွင်းရမည် -
(က) နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံံသားများ၏ အကျိုးနှင့် စပ်လျဉ်းသောကိစ္စ၊
(ခ) အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသောကိစ္စ၊
(ဂ) ဥက္ကဋ္ဌကခွင့်ပြုသည့်အခြားကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်သို့ အဆိုများတင်သွင်း နိုင်ပါသည်။
ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၅၉၁၅၃၉၊၀၆၇-၅၉၁၃၅၇၊ ၀၆၇-၅၉၁၃၅၆၊	E-mail – publicaffairs.ht@gmail.com နှင့် Pgae address – https://www.facebook.com/publicaffairs.ht သို့ တင်ပြလိုသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် တိုင်ကြားစာများအားဆက်သွယ်	ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကိုမည်ကဲ့သို့	ရယူနိုင်ပါသလဲ။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒေများကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် Website ၏ပင်မစာမျက်နှာရှိ “ဥပဒေဆိုင်ရာများ”ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ “ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ”နှင့် “ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ”ခေါင်းစဉ်ခွဲများအားနှိပ်၍ဝင်ရောက်ပြီး Download ရယူနိုင်ပါသည်။
အဆိုများအားအသေးစိတ်ဖတ်ရှုလိုပါကအဆိုဆွေးနွေးသည့်နေ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဥပမာဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊သတ္တမမြောက်နေ့ (၃၀. ၁၀. ၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ဆွေးနွေးသည်အဆိုဖြစ်ပါကယင်းနေ့၏အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း)တွင်အသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
အဆိုများကိုသာမန်အဆို၊အရေးကြီးအဆိုဟူ၍ခွဲခြားကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။အဆိုများဟူသောစာမျက်နှာ၏ဘယ်ဘက်ရှိ “အဆိုအမျိုးအစားရွေးချယ်ရန်” ဟူသောနေရာတွင် သာမန်အဆိုနှင့် အရေးကြီးအဆိုကို ခွဲခြားကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်တင်သွင်းခဲ့သောအဆိုများအား ပြည်သူ့လွှတ်တော် Website ၏ပင်မစာမျက်နှာရှိ “အစည်းအဝေး”ဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ “အဆိုများ”ဟူသောခေါင်းစဉ်ခွဲအောက်တွင်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု၍ Download ရယူနိုင်ပါသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးနေ့စဉ်မှတ်တမ်းများအားကြည့်ရှုလိုပါက ပြည်သူ့လွှတ်တော်Website ရှိ အစည်းအဝေးဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ အစည်းအဝေးများ ဟူသောခေါင်းစဉ်ခွဲအောက်တွင် သက်ဆိုင်ရာနေ့အလိုက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို PDF ဖိုင်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည့်အပြင် Download ရယူလိုပါက Download Pattern ကိုနှိပ်၍ရယူနိုင်ပါသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် Website - www.pyithu.hluttaw.mm
ပြည်သူ့လွှတ်တော် Facebook - https://www.facebook.com/pyithuhluttaw.gov.mm
၂. ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)
၆. ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (PNO)
၇. ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ZCD)
၈. လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (LNUP)
၉. ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ (KDUP)
၁၀. ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ (KSDP)
၁၁. “ဝ” ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (WDP)
၁၂. တစ်သီးပုဂ္ဂလ (INDEPENDENT)